Rita, Writing for My Sake!: ဖြူး
Posted by Rita at 11/20/2009 12:40:00 AM
ကိုယ့်ကို ဖြူးမြို့အကြောင်း ဝေဝေဆာဆာပြောပြ
မယ့်သူမရှိပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ တစ်ဝက်လောက်
စပါးစိုက်ခင်းတွေ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးသလို။
ရီတာ ပြောပြနေသမျှ ဖြူးကို စိတ်ထဲ အသေအချာ လိုက်မှတ်ထားလိုက်ပြီ။။
I suddenly go flashback in my childhood.
But I can't see or remember all.
Most events are blur.
I think your IQ is much more than me.
မိုးရွာရင်တော့ တခုခုကို သတိရတာ လူတိုင်းပဲထင်တယ်။ Rita တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ အစ်မတို့ဘက်မှာတော့ မိုးရွာရင် ကျွဲနွားတွေလည်း ချည်တိုင်ဟောင်းကို သတိရတယ်လို့ ပြောစမတ်ရှိပါတယ်။
I also miss my Phyuu trip with my colleagues.
မိုးရွာရင်တော့အပြင်မထွက်ချင် ။ ပြတင်းပေါက်က မိုးစက်တွေငေးနေရတာပိုပြီးကြိုက်တယ် ။.
မငယ်နိုင် comment ကရီရပ:)) (မရီတာရေဆောရီး)
ဖြူး ဘိုးဘွားရိပ်သာ ကိုရော ထည့်မရေးဘူးလား ထ(၂) မှာရော သူငယ်ချင်းတွေရှိလား T-ဒေါ်ခင်စိုးဦးတို့ T-ဒေါ်အေးမြင့်တို့နဲ့ရော သင်ဖူးလား။ ဖြူးတောင်ပေါ်ဘုရားပွဲ အကြောင်းလေးလဲ ရေးအုံးလေဗျာ....အားပေးနေပါတယ် :)
Anonymous ဘယ်သူပါလိမ့်။ ပြောနိုင်ရင် ပြောသွားပါဦး။ သိချင်လိုက်တာ။
ဒေါ်ခင်စိုးဦးနဲ့ ၉ တန်း ကျူရှင် Phys & Mathsသင်ဖူးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမ ကျောင်းမှာ မရှိတော့ဘူး။ ပင်စင်ယူချိန်တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ အလုပ်ထွက်လိုက်သလား၊ ဆေးပင်စင်လား မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကျူရှင် တက်ရင်း ဆရာမ အဖေ မွေးနေ့ သွားစားကြတာ မှတ်မိပါသေး။
ဒေါ်အေးမြင့်က ဘယ်သူလဲ။ ၁ဝတန်း ဆိုရင် အဲဒီမှာ ကိုယ် မရှိတော့ဘူး။
ဖြူးမှာ ၅ နှစ်ခွဲတောင် နေလာတာ မြသိန်းတန် ဘုရားပွဲ (တောင်ပေါ်) တခါမှ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်က အဲဒါမျိုးကျ ဝါသနာမပါလို့။ :)
Anonymous ဘယ်သူပါလိမ့်။ ကိုယ့် batch များလား။
ကျွန်တော်က ထ (၂) က ပါ။T-ဒေါ်အေးမြင့်က Eng ကျူရှင်သင်တာလေ။ ၉၈ မှာ ၁၀တန်းအောင်တာပါ...same batch ဖြစ်မလား junior ဖြစ်နေမလားတော့ မသိဘူးဗျ...
'98 batch ဆို တတန်းငယ်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ် '98 မှ ၁ဝ တန်းအောင်တာ။
ထ (၂) မှာ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတော့ မရှိဘူး။
အောင်သုခ ဆီစက်က မေသူစိုးလား မသိ။ နာမည်မေ့နေပြီ။ သူကတော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းမို့ သိတယ်။ သူက ကိုယ်တို့ batch, ကျောင်းပဲ ကွဲတာ။
အောင်သုခနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်မှာရှိတဲ့ အိမ်ကြီးက ဆရာ ဦးမြင့်ဌေးက ကိုယ့်ဆရာ အရင်းခေါက်ခေါက်ပေါ့။ ဆရာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အမှတ်ရစရာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။
အမြဲလိုလိုလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် မရီတာ။ အားပေးနေပါတယ် .....
pauk က ဖြူးကို စိတ်ဝင်စားတယ်လား။ ရေစက်ရှိလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကတော့ နေခဲ့ဖူးတာရယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေရယ်ကြောင့် စွဲလမ်းနေတာပါ။ အဲဒါတွေ ဖယ်လိုက်ရင် ဖြူးက တခြားမြို့တွေထက် ဘာမှ မထူးခြားတဲ့ သာမန်နေရာလေးပါပဲ။
ဥပမာ ပေါက်တို့ မေမြို့ဆို နေလဲ မနေဖူး၊ ဘယ်သူမှ မရှိပေမယ့် စွဲလမ်း နေချင်စရာကောင်းတယ်။
ဖြူးမှာ စပါးခင်းတွေတင်မကဘူး။ ကြံခင်းတွေလည်း ရှိတယ် ပေါက်။ ၃/ ၄ မိုင်လောက် အကွာမှာ ဇေယျဝတီ သကြားစက် ရှိတယ်လေ။
ဖြူးအကြောင်း ရေးစရာတွေ ရှိနေသေးတယ်။ ထပ်ရေးဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ဒေသန္တရ observation တော့ ခပ်ညံ့ညံ့ပဲ။ မှတ်ဉာဏ်ကလဲ မကောင်းသေး ဆိုတော့ တချို့ဟာတွေ မေ့နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ SK ကို ပြန်မေးပြီး ရေးရတာပေါ့။ =)
My grandfather was from Phyu,
in my childhood,I spent my summer vacation at there2or3times with my grandparents.
I also love Phyu Myo.
I love to swim at Phyu Chaung ( river ) and farouite thing is ridding bicycle with friends( cousins) in evening.
Thank u, Uncle. =)
ဟုတ်တယ် မငယ် တိရိစ္ဆာန်တွေတောင်မှ သတိရတတ်ကြသေးတယ်။ လူ ဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ခုလို အဝေးမှာ တယောက်တည်း ရှိနေတဲ့ အချိန်ဆို ဆိုဖွယ်ရာ မရှိပြီလေ။
momiji >>> အစ်မ စိတ်ပါရင် အဲဒီ trip လေး အကြောင်း ရေးပါလား။ ဖြူးအကြောင်း နဲနဲပဲ ဖြစ်ဖြစ် နားထောင်ချင်လို့ပါ။
amayarko >>> ဒီနေ့ ရုံးမှာ အားနေတော့ ကိုယ်လဲ comment တွေကို ပြုံးပြီး ဖတ်နေမိတယ်။ :D
တောင်ကြီး -ရန်ကုန်သွားရင် ဖြူးမြို့လေးကို ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကြည့်မိတယ်။ တစ်ကယ်တော့ နာမည်ကြီး သကြားစက်ရှိလို့ ကြည့်မိရင်း အနီးအနားက မြို့တွေကို သတိပြုကြည့်မိတာမျိုးပါပဲ။ နောက်ကိုဆိုရင် ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ ဘလောဂ်ဂါလေးကို လွမ်းအောင် ၊ စာတစ်ပုဒ်ဖွဲ့နိုင်လောက်အောင်ပြုစားတဲ့ ဒီမြို့လေးကို ရောက်ရင်ဖြင့် အရင်ကထက် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်မိတော့မယ် ထင်ပါရဲ့.....
ဪ။ မေမြို မန်းလေးကို လွမ်းလိုက်တာ။
ဘယ်နေရာမှ အကြာကြီး မနေပါဘူး။ မန်းလေးကိုတော့ သံယောဇင်ရှိသား။
အညာကို ချစ်ကြတဲ့လူတွေကို အံ့လည်းသြ သဘောလည်းကျမိတယ်.. အညာကို သိပ်ခံစားလို့မရလို့
တကယ်တော့ အံ့သြစရာ မရှိပါဘူးလေ။
လူဆိုတာ ငါ့နေရာ ဆိုတဲ့ အစွဲနဲ့ နေသားကျခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာကို တွယ်ဖက်တာပါပဲ။
အညာကလူတွေကလည်း အောက်ပြည်အောက်ရွာကို ခံစားလို့ ရမယ် မထင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်။ အနေကြပ် အသေခက်။ မြေကြီးမရှိ ဘာမရှိ၊ မီးပျက်ရင်တောင် တင်စရာ ရေမရှိ။ အထပ်မြင့်တွေ နေတဲ့သူဆိုရင်ပေါ့။
ဒီလိုပဲ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကလူတွေကလည်း ထင်လိမ့်မယ်။ ဒီလောက်စုတ်ပြတ် လူ့ အခွင့်အရေးမရှိတဲ့ နိုင်ငံကိုများ ပိုက်ဆံကုန်ခံပြီး ခဏခဏ ပြန်ချင်ကြတာ ဘာခံစားချက်နဲ့ များလဲလို့။
အတ္တပါပဲ။ ကိုယ်နေနေကျနေရာ၊ ကိုယ်နဲ့ တူရာတူရာတွေ ရှိတဲ့နေရာ၊ ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်တဲ့သူတွေ ရှိတဲ့နေရာမို့ တွယ်ဖက်ချင်တာပဲ။
တချို့တွေ ကြွေးကြော်သလို ဖြူစင်စွဲမက်စွာ စာဖွဲ့လောက်တဲ့ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ကြီးလို့ မထင်မိတာတော့ အမှန်ပဲ :D :D
အဲဒီစိတ်ဟာ အဲဒီလို စာဖွဲ့လောက်တယ်။ နိုင်ငံချစ်စိတ်ဓါတ်ကြီး ဖြစ်တယ် ဆိုရင်လည်း ဠင်းတလောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှသတဲ့။ လူတိုင်းမှာ အဲဒီ စိတ်ရှိတယ်။
လူဆိုတာ နိုင်ငံချင်းယှဉ်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ မြို့ချင်းဆိုရင် ကိုယ့်မြို့၊ ကိုယ့်မြို့မှာမှ ကိုယ့်ရပ်ကွက်၊ ကိုယ့်လမ်း၊ ကိုယ့်အိမ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်။
နန်းညီ ပြောတာနဲ့ နဲနဲတော့ သွေဖည်သွားပုံရတယ်။
စိတ်ထဲရှိတာကို ဆက်စပ်ပြီး ပြောလိုက်တာ။ ရှည်သွားတယ်။ ကိုယ်က စိတ်ထဲ အစာမကြေတာ တစ်ခုရှိရင် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ စကားပိုတွေကို မယုံတတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် သိပ်မဆိုင်လှပေမဲ့ ထည့်ပြောလိုက်တာ။
20 Nov 09, 09:51
SK: မရီတာ နဲ့ အမျိုးလာစပ်နေတာ
20 Nov 09, 09:53
SK: စပ်သာ စပ်နေတာ မရီတာလည်း ကျွန်တော့်ကို သိမှာမဟုတ် ..ကျွန်တော်လဲ မရီတာကို မသိဘူးဗျ... BTW သိပ်မကြာခင် ဖြူးပြန်အုံးမှာဗျာ... ဘာမှအုံးမလဲ ...:) သီးမွှေးလား မြေပဲယိုလား ...
Rita: SK >>> ထ (၂) ဆိုရင်တော့ မသိဖို့ များပါတယ်။ ဘာမှ မမှာချင်ဘူး။ တစ်ခုမှ မကြိုက်လို့။ ဟားဟား။ ပြန်ပဲလိုက်ချင်တာ။ ကိုယ် မြန်မာပြည်ပြန်ဖြစ်ရင်လည်း ဖြူးကို သွားဖို့ ကြိုးစားဦးမယ်။
20 Nov 09, 10:22
Rita: တစ်ခုတော့ မှာချင်တယ်။ လွယ်မယ်ဆိုရင် ဓါတ်ပုံရိုက်လာပေးပါ။ တံတားနဲ့ ဖြူးချောင်း၊ ကျောင်း၊ ဈေး၊ ကျောင်းနဲ့ ဆေးရုံကြားက လမ်းကလေး၊ ပြီးတော့ ရိုးမ နဲ့ ဝဲဒေါင့်။ များသွားပြီ ထင်တယ်။ =)
Rita: အဓိပတိနဲ့ နံပါတ်ဝမ်းက လက်ဖက်သုတ်ပွဲပါ မှာချင်တယ်။ =)
20 Nov 09, 10:32
SK: အိုခေ..... ပြီးရင် share လိုက်မယ် ....ဖြူးကတော့ ဒီတိုင်းပါပဲဗျာ ..တနှစ်ထက်တနှစ် ဖုန်ပိုထူလာတာရယ် လမ်းတွေပျက်လာတာရယ် ပဲရှိတယ် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲတာမရှိပါဘူး
SK: ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်မြို့လေးမို့ ဘာဖြစ်ဖြစ် မပစ်နိုင်ဘူး ချစ်နေရတာဗျ ..ဟဟ
20 Nov 09, 10:33
SK: ဟဟ ငပိထောင်းရော..
20 Nov 09, 10:35
SK: ဆောင်းတွင်းဆို သိပ်သာယာတာဗျ..ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ရင် ဆောင်တွင်းပဲပြန်တယ်... မနက်စောစောထ ဖြူးချောင်းဘက်လမ်းလျှောက် .. အကြော်နဲ့ကောက်ညှင်းပေါင်းဝယ်စား.. တခါတလေလဲ ခေါက်မုန့် စားတယ်...ခဲတံဝါးလည်း
SK: စားကောင်းတယ်ဗျာ... ခုတောင်ပြန်ချင်လာဘီ..:)
ဖြူးဈေးမီးလောင်သွားသေးတယ်လေ...။ ဝဲဒေါင့်တော့ ရောက်ဖြစ်ပါသေးတယ် အရင်လို လမ်းတွေကြမ်းတုန်းပဲ
ရီတာ ရေးထားတာကောင်းလိုက်တာ။ ကိုယ်တောင် ဖြူးကိုကားနဲ့ပဲ ဖြတ်သွားဘူးပေမဲ့ လွမ်းချင်ချင် ဖြစ်သွားမိတယ်
စစ်တပ် ထိပ်က ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်တို့
နှစ်လက်ို သုံးခေါက်လောက် ဖြူးကို ကားနဲ့ ဖြတ်ဖြတ်သွားခဲ့တာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိမယ်...။
ကဗျာဆရာရဲ့ အဓိပတိ ထမင်းဆိုင်မှာ ခဏခဏ ထမင်းစားဖူးတယ်..။
တိုင်းရဲ့ အရှေ့ခြမ်း၊ အနောက်ခြမ်းမို့ ဝမ်းကွဲမြို့လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်..။
ရိုးမကိုကျော်တဲ့လမ်းကြမ်းက သွားရင် ဖြူးနဲ့ တို့နဲ့ နီးနီးလေးလေ.. တဖြောင့်တည်းပဲ.. :)
AMMK: ဖြူးက ထွက်တော့ ၁၅ နှစ် ရှိသေးတာ
AMMK is offline. You can still send this person messages and they will receive them the next time they are online.
ဒါဆို မောင်က ရန်ကုန်သားပေါ့လေ
Addy: ကျုပ်ကဗျာ ကိုမကြိုက်ဘူးလား
Addy: အေဒီ နဲ့ ဘီစီ
တလက်စတည်း ခရစ်ရှန်နတီ ကိုပါနဲနဲလေ့လာနေတယ်
Oh you are still chatting with your friends. Fair enough!
ဟုတ်တယ်။ ညက Addy နဲ့ ပြောစရာ ရှိလို့ ဝင်ထားတာ။
22 Nov 09, 14:43
linn: Ur post "Pyu" make me remember this town. I was posted to this town foracertain period and the people are friendly, always try to help others. Like you, it is also my second native. I remember its
22 Nov 09, 14:48
linn: ka-htain & at that time all people donate. I remember shan-o-se. the most is pyu durian, i think it is the best in our country. It has too many stories to tell like our Sayargyi Na-ga U Thein Hlaing.
22 Nov 09, 14:51
linn: I want to send uaphoto of ur school Myo-ma if u want to, please contact me to my e-mail if u want.
ရီတာက ဖြူးကိုလွမ်း သလို ငါလဲ မန္တလေးကို လွမ်းတယ်ကွာ...
အဲဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လက်ရှိအကြောင်းအရာ တွေပါ သိသေးတာ မဆိုးဘူးပဲ။ တို့ဆို အဲလောက်အရွယ် တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်ကုန်ပြီ..
ပုလုကွေး: ဒါနဲ့ ဖြူးဆိုလို့ ဒီအချိန်ဆို ဖြူ သီမွှေးငှက်ပျောသီးတွေ ပေါနေလောက်ပီထင်တယ်နော်
ဖတ်ပြီး အလွမ်းတွေကို ခံစားရတယ် မရီတာ...
ဖြူးမှာ မြဧရာ စာပေ ရှိတာတော့သိတယ်။ ကျန်တာတော့ မသိပါဘူး။
ဦးမိုးအောင်တို့ဆိုင်ပေါ့။ ဈေးမြောက်ဘက်မှာ ရှိတယ်။
သိသားပဲ.. ဘာမှာပေးရမလဲဗျ.. စာကြည့်တိုက်ကတော့ ပျက်သွားရှာဘီ....
အဲဒိဘိုးတော်က အရင်ကတော့ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဘောလုံးနဲပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးရေးတယ် အခုတော့မသိဘူး
ဟုတ်လား။ မှာစရာတော့ အထူးအထွေ မရှိပါဘူး။
ကိုယ့်နဲ့တော့ ဟိုမှာနေတုန်းက ကောင်းကောင်းသိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဖေဖေနာမည်ပါ ထည့်ပြောမှ ပြန် မှတ်မိလိမ့်မယ်။ (ကိုယ့်အိမ်နာမည်ပဲ သိကြတာမို့လို့)။
စာကြည့်တိုက် ပျက်သွားတယ် ကြားတာတော့ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဘူး။ သူတို့တွေ သေချာ လုပ်ခဲ့ကြတာ။
၉၇ မှာ ၁၀တန်းအောင်တယ်။၁၀တန်းပြီးကတည်းက
Testing ဘယ်သူများပါလိမ့်။ same batch ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထ ၁ က ထွက်တာလား။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ထ၁ ကပါ။ ဆေးရုံရပ်ကွက်မှာနေတယ်။
ကျော်သက်ထွန်းလို့ခေါ်တယ်။၁၀ တန်းတုန်းက ဆရာမဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်အခန်းမှာတက်တယ်။ ၉တန်းတုန်းက
သိရတာ တကယ်ပဲ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
၉ တန်းမှာ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမ ရဲ့ အခန်း (ဆရာမ နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ A ခန်းကပါ)။ ဆရာမ ဒေါ်မူမူလေးကို သိတယ်။ Physics သင်တာ။ ၉ တန်းမှာ နှစ်ဝက်ထိပဲ တက်ခဲ့ရတယ်။ ၁ဝ တန်းရောက်တော့ ဖြူးမှာ မရှိတော့ဘူး။
စာလာဖတ်တာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဖြူးအကြောင်း post တင်မိတာ ဖြူးကလူတချို့၊ ဖြူးမှာ နေဖူးခဲ့သူ တချို့ နဲ့ အဆက်အသွယ်တွေ ရခဲ့တာ ဝမ်းသာစရာပါ။
အမရေ.. ညီမလေးကလည်း ဖြူးမြို့ကပါ။ အမရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး အိမ်ကို အရမ်းလွမ်းတာပဲ။
ကျွန်တော် လည်းဖြူး ထ ၁ ကပါပဲ အမ ...၉၉ အောင်တာပါ ..ဆရာမ ဒေါ်ခင်စိုးဦးတပည့်ပါပဲ ....အမက အခုဘယ်မှာလည်းမသိဘူးနော် ...ကျွန်တော်လည်းအမလိုပဲ ပြောင်းလာရတာပါ ....အမှတ်ရနေမိတယ်ဖြူးကို
@Mgbothu, တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ 99 batch ဆို ၂ နှစ်လောက်ငယ်လိမ့်မယ်။ ကိုးတန်းမှာ ခဏလေးပဲ ကျူရှင်ယူခဲ့ဖူးပေမယ့် ဆရာမကိုလည်း သတိရတယ်။ ကျောင်းကိုလည်း သတိရတယ်။ မြို့ကိုလည်းသတိရတယ်။ ခုလောလောဆယ် စင်ကာပူမှာပါ။
တို့လဲ ဖြူးသူပါ။ အထက(၁)မှာအောင်တာ... (၉)တန်းတုန်းက (c) ခန်းမှာ... ဆရာမ ဒေါ်ခင်ရီတိုးအတန်းကပေါ့.. အခုတော့ဆုံးသွားပါပြီ.. ဖြူးအကြောင်းဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... တို့ ရီတာ့ကို သိသလိုပဲ.. (၉၇) အောင်တာပါ... ကျူရှင်တွေတော့ တူတယ်.. မေသူစိုးကိုလဲ တို့သိတယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်... mail ကို add ထားတယ်သိလား....
တို့လဲ ဖြူးသူပါ... ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်... တို့လဲ ထ၁ ကပဲ.. (၉)တန်းတုန်းက ဆရာမဒေါ်ခင်ရီတိုးအခန်းကပါ... (၉၇) အောင်တာပါ.. မေသူစိုးကိုလဲ တို့သိပါတယ်.. တို့တွေ သိများသိမလား မသိဘူး... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ။ တို့ mail ကို add ထားတယ်သိလား..
ဆရာမ ဒေါ်ခင်ရီတိုး ဆုံးသွားတယ်။ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ အသက်သိပ်ကြီးမှာ မဟုတ်သေးဘူး။ ၉ တန်းမတက်ခင်တည်းက ဆရာမကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ၉ တန်းရောက်တော့လည်း သင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ တတွဲတွဲနေတဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့ အမေက ဆရာမဒေါ်ခင်ရီတိုးတို့လိုပဲ ၉ တန်းက ဆရာမမို့။
ပြန်သွားဖြစ်ရင်တောင် သိခဲ့ဖူးသူတွေ အတော်လျော့ကုန်ရော့မယ်။
ဒို့လည်း ဖြူးသူပါ။ အင်တာနက်မှာ ဖြူးနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘာများရှိမလဲဆိုပြီး လိုက်ရှာရင်းနဲ့ Rita ရဲ့ blog ထဲကို ရောက်လာတာပါ။ ကိုယ့်မြို့လေးကို သံယောဇဉ်ဖြစ်မိကြတယ်ကြားရလို့ဝမ်းသာမိတယ်။ ထ၁ ကနေ ၁၀ တန်းကို ၉၅ က အောင်တာပါ။ ဆရာမ ဒေါ်ခင်ရီတိုးဆုံးသွားတာ မသိလိုက်ဘူး။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ မနှစ်က ဗမာပြည်ပြန်တော့ ဖြူးကို ၁ ညအိပ် ပြန်ခဲ့သေးတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ဖြူးအထိ ပြန်ဖြစ်မလား မသေချာသေးဘူး။ ၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီက ပြုလုပ်တဲ့ ဆရာကန်တော့ပွဲ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ http://phyumyoe.wordpress.com/2011/10/16/teachers-day-of-s-h-s-1-phyu-township/
သိခဲ့ သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာတွေထဲက ဦးစိုးတင်မြင့်နဲ့ ဒေါ်သက်သက်ဝင်း စုံတွဲကို တွေ့လိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ အဖေနဲ့ အမေပေါ့။ ဖြူးမှာနေတုန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရပ်ကွက်ထဲက သူတို့အိမ်က ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာတပိုင်းပါပဲ။ အရင်တုန်းကထက် ဘာမှ သိပ်အရွယ်ကျသွားတယ် မထင်ရဘူး။ ကျန်းကျန်းမာမာရှိသေးတာ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာလိုက်တာ။ ဆရာကြီးက နည်းနည်း ပိန်သွားသလိုရှိတယ်။ ဆရာမဟာ ခုထက်ထိ ဆံပင်ကောင်းတုန်းပဲ။ =)
ဒါဆို Rita ဒို့ထက်ငယ်မယ်နဲ့တူတယ်။ ဆရာ ဦးစိုတင်မြင့်သမီးက ဒို့ထက်ငယ်တယ်။ ဘယ်နှတန်းငယ်လဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။
ဟုတ်တယ်။ ဆရာမကို ဆရာကန်တော့ပွဲ ဗွီဒီယိုထဲမှာ သတိထားလိုက်မိတယ်။ အရင်လိုပဲ လှလျက်ပဲနော်။ အရွယ်မကျသွားဘူး။ ဖြူးမှာ ဘယ်နားမှာ နေခဲ့တာလဲ။ ဒို့က ၄ လမ်း ဈေးနားမှာ။ ဒို့အိမ်ရှေ့မှာ အုတ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ ရေအိုးစဉ်ရှိတယ်။ ရှေ့လ ပြန်တဲ့အခါ ဖြူးအထိပါ ပြန်ဖြစ်ရင် ဘာမှာအုံးမလဲ။
95 အောင်ဆိုရင် မမေခိုင်လတ်ထက် ၂ နှစ်လောက် ငယ်မယ်။ ဖြူးကို မှာစရာတော့ မရှိပါဘူး။ ပြန်ပဲ လိုက်ချင်တာ။ =) တခါလောက် ပြန်သွားရဦးမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိတယ်။ သိခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေတောင် သိပ်မကျန်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။
အမရေ....ဖြူးသားလေး တစ်ယောက်လည်း အမဘလော့ကို လာဖတ်ပြီး ဖြူး ကိုလွမ်းသွားပါတယ်ဗျာ..ကျနော်က ဖြူးမြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်ခြမ်းက သာယာကုန်းရွာကပါ....အမရေ..အခုတော့ဖြူးချောင်းတံတားရဲ့ ဆည်းဆာက ခေတ်မှီလာပြီလို့ပြောရမယ်...အမတို့ တုန်းကလို..စက်ဘီးတွေနည်းသွားပါပြီ..ဆိုင်ကယ်တွေ နဲ့ ဖြစ်နေပြီဗျ..ဟဲ ဟဲ..
ဒီတခါ ကြုံလို့ အဆင်ပြေရင် ဖြူးချောင်းတံတားပေါ်ကနေ ညနေခင်းကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါဦး။ ပြီးရင် email နဲ့ ပို့ပေးပါ။ =)
Pyu သားလေးပါ ၂၀၀၁မှာ ထ ၁ ကအောင်ပါတယ် အမှတ်တရလေးတွေ ပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်လေးစားမိပါတယ် အိမ်ကိုလွမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ အမစာစုလေးတွေက အားဆေးတစ်ခွက်ပါ pyu ချောင်းသောင်ပြင်မှာ ဘောလုံးကန်ခဲ့တာနဲ့ ထ ၁ kyi pyar ဆောင် သွားတဲ့ လမ်းဘယ်ဖက်က ရေကန်သေးသေးလေး(ဗွတ်အိုင်) ထဲမှာ ရေကူးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်တွေကို သတိရတယ်ဗျာ .....
ကြည်ပြာဆောင်က တို့တွေတုန်းက အောက်ထပ်က ၆ တန်း၊ အပေါ်ထပ်က ၇ တန်း။ ၆ တန်းတုန်းက ဆရာမ ဒေါ်စန်းစန်း အခန်းက၊ ၇ တန်းရောက်တော့ ဆရာမ ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း အခန်းက။
ဘယ်ဘက်ခြမ်းဆိုတော့ မြတ်လေးဆောင်တို့ ဘာတို့ ၅ တန်းဆောင်တွေ ခေါင်းရင်းဘက်လား။ အဲဒီနားဖြင့် ချိုင့်ခွက်ဖြစ်နေလို့ ရေဝပ်နေတာသာရှိမှာ၊ ဘယ်လိုများရေကူးတယ် မသိဘူး :D။
အဲဒီ ကြည်ပြာဆောင်သွားတဲ့လမ်းဆို သဲမြေလည်းမဟုတ်၊ မြေဝါတွေ မြေစေးတွေဆိုတော့ မိုးတွင်းဆို ခဏခဏချော်လဲတဲ့နေရာ။
Phyu Thar Lay II said...
ဖတ်​ခွင့်​ရတာ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ဖြူးမြို​လေး အ​ပေါ်သံ​ယောဇဉ်​ရှိတဲ့အတွက်​လည်း ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်။